RASMI: Daawo sawirrada Ronaldo oo saxiixay heshiiskiisa cusub (Muxuu ka yiri shirkii jaraa’id) – Gool FM
RASMI: Daawo sawirrada Ronaldo oo saxiixay heshiiskiisa cusub (Muxuu ka yiri shirkii jaraa’id)
(Madrid), 07 Nof 2016 –Weeraryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday in waayihiisa Kubadda Cagta ay uga hartay 10 sanadood oo hadda soo socota.
Hadalka Ronaldo ayaa ku soo aadaya xilli uu shalay saxiixay heshiis cusub oo uu Real Madrid kula sii joogayo illaa sanadka 2021, waxaana xilliga heshiiskani ku eg yahay ay da’da Ronaldo noqonaysaa 36 sanadood.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan sii joogo halkan, kani ma noqon doono heshiiskeygii ugu dambeeyay kubadda Cagta” ayuu ronaldo ka sheegay shirkiisii jaraar’id ee uu ku saxiixayay qandaraaskiisa maanta.
“Waxaan rabaa inaan sii ciyaaro illaa aan ka gaarayo 41 sanadood, waxaan la kulmay Di Stefano wuxuuna ii sheegay inazan sii wato ciyaaraha anigoo Horyaal ah” ayuu yiri Ronaldo.
“10 sanadood ayaa ciyaarahayga iiga hartay, ma xaqiijin karo inan sii joogayo Real Madrid markaan 40 jir gaaro, halkan kama ciyaari doono cimrigayga ama ha i rabaan ama yaysan i rabin” ayuu caddeeyay Ronaldo.
Ronaldo ayaa heshiiskiisan cusub isbuucii mushaar ahaan u qaadan doona 500 oo giniga istarliinka ah.
Cristiano Ronaldo oo daaha ka rogay hadaladii yaraa uu ku yiri Ferguson si uu u keeno Man United 2003-dii